DAAWO DHIIGGA: Xiddigii Hore Inter Oo Xabsiga Loo Taxaabay Isagoo Dhiiggu Ka Da'ayo Kaddib Markii Uu Gacantiisa Ku Garaacay Hooyadii Iyo Aabbihii | Laacibnet.net
HomeSerie ADAAWO DHIIGGA: Xiddigii Hore Inter Oo Xabsiga Loo Taxaabay Isagoo Dhiiggu Ka Da’ayo Kaddib Markii Uu Gacantiisa Ku Garaacay Hooyadii Iyo Aabbihii
DAAWO DHIIGGA: Xiddigii Hore Inter Oo Xabsiga Loo Taxaabay Isagoo Dhiiggu Ka Da’ayo Kaddib Markii Uu Gacantiisa Ku Garaacay Hooyadii Iyo Aabbihii
Xiddigii hore khakda dhexe uga ciyaari jiray Inter Milan ee Fredy Guarin ayaa xabsiga loo taxaabay isagoo dhiiggu ka da’ayo kaddib markii uu waalidkii gacan u qaaday.
Khamiistii shalay ayay ciidamada booliska ee magaalada Envigado ee waddanka Colombia ay soo qabteen Guardin oo dharkiisa dhiig kaga yaallo meelo badan, waxaanay wararku sheegayaan in uu la dagaallamay waalidiintiisa oo uu guriga ugu tegay.
Guarin ayaa kooxdiisa hadda ee Millonarios weydiistay dhawr maalmood oo fasax ah oo uu arrimo shaqsi ah kusoo dhamaysanayo, kamana qayb gelin dhawrkii tababar ee ugu dambeeyey ee kooxdiisa.
Laba muuqaal oo daawasho ah oo baraha bulshada lasoo geliyey ayaa muujinaya Guarin oo ay gacanta ku hayaan ciidamada boolisku, isla markaana usii wadaan saldhigga booliska iyo ugu dambaynta oo muuqaalku soo bandhigayo iyadoo uu ku xidhan yahay saldhigga.
Laacibkan oo ay da’diisu tahay 34 jir ayaa kasoo dhex muuqanaya Video-ga isagoo qofka duubaaya si dagaal ah u weydiisanaya in uu joojiyo duubista.
Wariye lagu magacaabo Guillermo Arango ayaa kusoo warramay in kooxda Millonarios ay garab taagan tahay xiddigeeda, ayna ka caawin doonto wax kasta oo suurtogal ah sidii uu dibedda ugu soo bixi lahaa.
Dhinaca kale, booliska ayaa daboolka ka qaaday in Guarin uu weerar ku qaaday waalidkii oo uu waliba dhaawac u geystay.
Sarkaal ka tirsan booliska ayaa yidhi: “Wuxuu si toos ah u weeraray waalidiintii oo lasoo xidhiidhay booliska si ay uga qabtaan.”
Guarin ayaa u ciyaaray Boca Juniors xilli ciyaareedkii 2005/06ka hor intii aanu tegin qaaradda Yurub oo uu ku biiray kooxda Saint-Etienne oo laba sannadood kaddib uu usii dhaafay FC Porto oo ay kasii iibsatay Inter Milan, iyadoo uu halkaasna usii dhaafay waddanka China oo uu u ciyaaray kooxda Shanghai Shenhua.
Qaaradda Koonfurta Amerika ayuu ku laabtay isagoo u ciyaaray kooxda reer Brazil ee Vasco da Gama, waxaanu sannadkan u saxeexay kooxda Millonarios oo la filayo in uu iyadana ka tegi doono kaddib dhacdadan.